Ihlala ixesha elingakanani intlanzi? Ngena uze ufumanise ukuba ihlala ixesha elingakanani | Ngeentlanzi
Usenokuzibuza ihlala ixesha elingakanani intlanzi, buyintoni ubomi bayo obuqhelekileyo kwi-aquarium kwaye inyani kukuba, ngokuqinisekileyo, andinakukuxelela elona nani leminyaka kuba Iintlanzi zingaphila ukusuka kwiiyure ezimbalwa ukuya kwiminyaka embalwa, ngokuxhomekeka kumaxesha amaninzi kukunganyangeki kwentlanzi, indala kangakanani kwaye inyuswa njani.
Xa benayo kwiitanki zentlanzi, hayi ii-aquariums, uninzi lweengcali zithi zinokuhlala zi I-2-3 iminyaka kuba iintlanzi azibambi ixesha elide ngenxa yoxinzelelo abahlala kulo. Abanye bathi, ukuba bakhathalelwe kakuhle, banokuhlala iminyaka emininzi kwaye bakukhaphe ebomini bakho.
Inyani yile yokuba iintlanzi esizithengayo zihlala ziqhelekileyo mncinci ngeminyaka (malunga neenyanga ezi-2 ubudala) apho baya kuhlala nathi ubuncinci iminyaka ukuba sibakhathalele. Kuxhomekeke kuhlobo, uya kuyenza ihlale ixesha elide okanye elifutshane. Umzekelo, iintlanzi ezisetyenziselwa ukucoca iifestile, izinto zokucoca, zinokuhlala ngaphezulu kweminyaka emi-2 ukuba ziphilile kwaye azinaxinzelelo, ukongeza ekukhuleni kakhulu.
Iingcali zithi intlanzi, kunye Umgaqo-siseko olungileyo kwaye ukhathalelwe (fumanisa ungahamba ixesha elingakanani ungatyi), banokuphila I-10-15 iminyaka kwi-aquariums (hayi kwiitanki zentlanzi) kwaye banokude bandise loo minyaka inde, idlula leyo yenja. Kodwa, njengoko benditshilo kuwe, kufuneka inyamekeleke kakuhle indawo enamanzi apho ingasweli nto khona.
A "Umgaqo okhokelayo»Isixelela ukuba ubukhulu be-avareji yendalo, kokukhona iphila ixesha elide, ukuze ikhule, iya kuphila ixesha elide, nangona kuya kufuneka uyithathele ingqalelo i-aquarium yakho, awuyi kufuna nentlanzi inkulu kakhulu kuba ingatya ezinye iintlanzi.
1 Zihlala ixesha elingakanani iintlanzi eziorenji?
2 Ihlala ixesha elingakanani i-clown fish?
3 Ihlala ixesha elingakanani intlanzi yekayiti?
4 Ihlala ixesha elingakanani intlanzi yeguppy?
5 Ihlala ixesha elingakanani intlanzi ngaphandle kwamanzi?
6 Ihlala ixesha elingakanani intlanzi elwandle?
7 Ihlala ixesha elingakanani intlanzi yamanzi abandayo?
Zihlala ixesha elingakanani iintlanzi eziorenji?
Uninzi lweentlanzi esizithenga kwiivenkile ezinikezelwe kwintengiso yezilwanyana zasekhaya zihlala zibizwa intlanzi e-orenji, ikhaphethi okanye intlanzi yegolide. Zezona ntlobo zidumileyo kunye nezo sihlala sizibona kwiitanki zentlanzi nakwiindawo ezinamanzi. Nangona kunjalo, ayingabo abaphila ixesha elide.
Ezi ntlanzi zithambe ngakumbi kwaye zibuthathaka kunokuba sicinga. Kungenxa yoko le nto kukho iimeko apho sithenga khona esinye sezi zilwanyana zincinci kwaye siphila nje iinyanga ezimbalwa, kwaye kwaneentsuku ezimbalwa. Kuyinyani ukuba lo mthetho awusoloko uzalisekiswa, kuba ngononophelo oluchanekileyo, sinokwenza iintlanzi zeorenji zinyamezele nathi ukusuka I-2 ukuya kwi-3 iminyaka.
Kufuneka kukhunjulwe ukuba ezi ntlanzi zikhuliswa kumadama amakhulu apho zikhula kwaye zikhule ngokukhawuleza, nangona zisencinci. Ke ngoko, zonke iisampulu ezisevenkileni zeentaka nakwiivenkile zezilwanyana zincinci kakhulu.
Ihlala ixesha elingakanani i-clown fish?
Los I-clown fish sesinye sezona zilwanyana zithandwayo zasemanzini. Iyamangalisa umbala o-orenji nobomvu, zidityaniswe ne Imigca emhlophe, yenza ukuba kungathandabuzeki. Kuyinyani ukuba ngaphakathi kweli qela leentlanzi, kufikelela ngaphezulu kweentlobo ezingama-XNUMX ezigcinwe.
Kwindawo yazo yendalo, ezi ntlanzi zifumaneka emanzini ashushu e ipacific Ocean, inabantu abaninzi enee-coral reefs, ihamba nee-anemones, ezibakhusela kwizilwanyana ezinokubahlasela ngaxeshanye zinika imithombo eyahlukeneyo yokutya. Kule meko, ezi zilwanyana zihlala phakathi kweminyaka emibini nelishumi elinesihlanu malunga, kuxhomekeke, ewe, ngohlobo lwe iklownfish ekubhekiswa kuyo.
Ngokungafaniyo nezinye iintlobo zeentlanzi eziye zazalelwa ubomi ekuthinjweni, iintlanzi ezincotyiweyo azidingi kukhathala, kwaye zilukhetho olufanelekileyo lokuzibandakanya kwi-aquarium yethu, apho kungabikho nto ingaqhelekanga kwaye inyanyekelwa kakuhle, sinokonwabela ukusuka I-5 ukuya kwi-10 iminyaka.
Ihlala ixesha elingakanani intlanzi yekayiti?
Los intlanzi yekayiti Ziyenye yezona ntlanzi zincinci zaziwayo zasemanzini. Ukwahlukahlukana kwemibala yabo kubenza babe zizilwanyana ezinomtsalane, ngakumbi ezincinci endlwini. Ngokuthanda kwabo, kufuneka kuqatshelwe ukuba banentlalontle, ngenxa yoko ababonakalisi ngxaki xa behlala nezinye iintlobo.
Zonke ezi mpawu zenza ukuba intlanzi yekayiti ibe yenye yezona ntlanzi zicetyiswayo kubo bonke abo baqala kule hobby. Ngaphaya koko, sisilwanyana esingadingi kukhathalelwa, nangona singabosapho lwe intlanzi yekite okanye intlanzi yegolide.
Akumangalisi ukuba ezi ntlanzi zibe nobomi ekuthinjweni ukusuka kwi-5 ukuya kwi-10 iminyaka, ukuba nje bakhathalelwe ngokufanelekileyo.
Ihlala ixesha elingakanani intlanzi yeguppy?
Los intlanzi yeguppy Zezinye zeentlobo ezinabafuyi kunye nabalandeli abazithandayo. Ngaphakathi kolu hlobo, sinokufumana abantu abohluke kakhulu omnye komnye, ngokombala kunye ne-morphology, yiyo loo nto kuthandwa kwayo.
Zizilwanyana ezihlala kwiindawo ezinamanzi amatsha, ngakumbi kwezo zinamanzi asezantsi anjengemilambo, amachibi kunye namachibi. Kwimeko-bume yendalo, siyabafumana kumazwe e EMntla Merika njengaye Trinidad, Barbados, Venezuela nasemantla Brasil.
Iimpawu zamanzi ezigcina ezi zilwanyana kufuneka zibe nawo: iqondo lobushushu phakathi kwama-22 nama-28 degrees, ama-25 degrees lelona lelona liphezulu; i-pH kufuneka ibe yi-alkaline, kwaye ingaze ibe ngaphantsi kwe-6.5 okanye ngaphezulu kwe-8. Ukuba siyakufezekisa konke oku, ezi ntlanzi ziya kuba nakho ukuphila 2 iminyaka.
Ihlala ixesha elingakanani intlanzi ngaphandle kwamanzi?
Enye yezona zinto zixhalabisayo kubazalisi kukuba iintlanzi zihlala ixesha elingakanani emanzini. Kwaye, ngokuchaseneyo noko sicinga ukuba, ezi zilwanyana zinokunyamezela ixesha elithile ngaphandle kwendalo yasemanzini kuxhomekeke kwimeko ekuyo.
Ukuba, ngaphandle kwamanzi, intlanzi ikwindawo enobushushu begumbi elibandayo kwaye ibekwe kumphezulu ongafunxi ukufuma ngokukhawuleza, inokuhlala nobomi ukuya kuthi ga kwiyure enye.
Kukho iimeko apho iintlanzi ziye zatsiba, ngendlela engakholelekiyo njengoko kunokuba ngathi, kwitanki leentlanzi okanye echibini. Ukuba oku kuyenzeka, size sifumane iintlanzi zethu ziphila, kufuneka sizazise ngokukhawuleza kwisitya esinamanzi afanayo netanki leentlanzi okanye ichibi. Emva koko, kufuneka siyithambise ngononophelo ngekomityi, ukuze sisuse naziphi na amasuntswana othuli, njl njl. Kubaluleke kakhulu ukuba siyikhumbule into yokuba asizukuhlikihla iintlanzi ngamandla ukuthintela ukwenzakala kwangaphandle. Emva kokuyijonga ezimbalwa Iiyure ze24 Ngaphakathi kwesikhongozeli kwaye siqinisekisile ukuba kulungile, siya kuqhubeka ngokuyibuyisela kwitanki leentlanzi okanye echibini.
Ihlala ixesha elingakanani intlanzi elwandle?
Ngaphakathi kwendalo yaselwandle kukho iintlobo ezingapheliyo, uninzi lwazo ziyaloba. Phakathi kweentlobo ezahlukeneyo zeentlanzi kukho umahluko omkhulu, kwaye ixesha lokuphila belingayi kuba lincinci.
Ngokwesiqhelo, iintlanzi ezihlala ezilwandle naselwandle zihlala ixesha elide kunezihlobo zazo eziphila emachibini nasemilanjeni. Kukho iintlanzi ezihlala nje unyaka, ngelixa ezinye ziphila ukuya kwisiqingatha senkulungwane. Ngokukodwa, ama-sturgeons kunye namaqela afunyenwe angaphezulu kwe Iminyaka eyi-100. Kodwa ukuba besinokwenza umndilili wokulindelwa kobomi beentlanzi zolwandle, singatsho ukuba sikufutshane 20 iminyaka.
Ukuba sifuna ukwazi ukuba indala kangakanani intlanzi, kukho iqhinga elifanelekileyo. Njengakwimisesane ezotywe ngeziqu zemithi, ukuba sijonga kwizikali zentlanzi, zikwabonisa uthotho lwemigca yokukhula. Ngamnye wale migca ubonakalisa unyaka omnye wesilwanyana. Ukwenza oku, kuyimfuneko ukusebenzisa iglasi yokuphakamisa ephezulu, kuba ngeliso lenyama phantse ayinakwenzeka.
Ihlala ixesha elingakanani intlanzi yamanzi abandayo?
Iintlanzi zamanzi abandayo zibandakanya ezo zihlala emachibini, imilambo kunye nazo zonke iintlanzi zasekhaya eziphakanyiselwe i-aquariums kunye neetanki zentlanzi. Zininzi iindidi, kodwa, ngokungafaniyo neentlanzi ezihlala emanzini olwandle, zihlala zihlala ixesha elincinci.
Ukuba ngaphambili besitshilo ukuba iintlanzi zolwandle zinokufikelela kubude bexesha lokuphila, nokufikelela 20 iminyaka kunye namanani aphezulu kakhulu, iintlanzi zamanzi abandayo zihlala zihlala iminyaka emibini ukuya Iminyaka engama-15.
Siyathemba ukuba ngenqaku lethu sele unombono ocacileyo ihlala ixesha elingakanani intlanzi kunye nobomi bokuphila kwezi ntlanzi zincinci (kwaye azincinci kangako) esihlala sinazo ekhaya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Ihlala ixesha elingakanani intlanzi?
kakuhle ikatfish yam isaphila iminyaka emi-4
Phendula iintlanzi ezincinci
Linathi :) sitsho
Iintlanzi zam zineminyaka emi-5 ubudala kwaye zikwitanki leentlanzi kwaye kusekho okuninzi okuseleyo
Phendula ku lyneth :)
Ndinentlanzi yengonyama kwaye ngoku iphile iminyaka emi-5
Intlanzi yam isweleke namhlanje, iminyaka eli-13 kunye nam. Ndiziva ndibuhlungu, ndinezilonda entlokweni yam ezande kakhulu mva nje. Ngale ntsasa, wayelele xa wayehlala evuka kwangoko kwaye wasweleka emva kwemini.
Thu PainTer Entsha sitsho
Ndinentlanzi yengonyama kwaye kude kube ngoku iphile iminyaka eyi-13 kodwa ngaphandle kokuyishiya ngaphandle kokuhoywa
Phendula kwiThu PainTer entsha
elisa kakhulu sitsho
Iintlanzi zam ezibandayo zamanzi zibonakala ngathi ziyafa, ndincede!
Intlanzi yam sele iswelekile, ihlale iinyanga ezi-4
intlanzi yam ithe cwaka kwaye ayifuni kutya !! Andimazi ukuba unantoni ... iintsuku ezimbini ndamnika esinye isidlo andazi nokuba ingaba yiyo leyo. Nceda . kufana nokufa
UDiego Martinez sitsho
Ndinentlanzi eyasweleka ngo-Matshi kwaye ndikhuphisana ekupheleni kukaDisemba
Phendula u-Diego Martinez
Intlanzi yam eneminyaka emi-4 yasweleka yayiyiteleskopu enkulu
Ndineentlanzi ze-oscar ezandihlala iminyaka eyi-13.
Ndiyenza njani i-pH kunye nobushushu ukuba ndineentlobo ezininzi zeebhayidi kwi-aquarium yam
iparakeet yam ineminyaka eli-15 ubudala
NdineAcanthurus Achilles kwaye ibikumzi wam wamanzi iminyaka emi-4 ngenyanga ...
ineentlanzi ezininzi, eyona iye yahlala kakhulu yayikukunyuka: iminyaka elishumi elinesine !!!!!!! Usweleke kwiintsuku ezimbalwa emva kokuba inja yam eyayilingana nayo iswelekile …… .. mhlawumbi ngenxa yokudakumba ngenxa yokungamboni, andazi nokuba angabona lukhulu na, kodwa xa uHercules esondela kwitanki leentlanzi Isikali sihambile njengoko benditshilo, siwangaxa haha
Molo! Inja yam sele ikhona iminyaka emithathu kwaye ayifuni ukuhamba kakhulu kwaye ime nkqo kwaye iphefumla ngokukhawuleza okukhulu
mvume. ximena sitsho
ayisiyiyo yonke into abayithethayo iyinyani
Ndingusosayensi wezinto eziphilayo elwandle
Phendula ilayisensi ximena
Ndine-characius iminyaka eli-9 kwaye inkulu kakhulu kangangokuba umzimba awuhlali entendeni yesandla kunye nomnye ongaphantsi kweminyaka kunye nobukhulu
Molo, ndinentlanzi eyedwa kwaye ikwitanki leentlanzi ezingama-50 yelitha kwaye sele ineminyaka eli-15 ndingazi ukuba inyani kwaye inyani yokuba amahlwempu akanakukhathalela
Ewe, ndandinentlanzi e-orenji, uhlobo olwalubiza i-100 pesetas ngelo xesha, kwaye kwitanki yeglasi, eqhelekileyo, ndiphila iminyaka eli-17. Ewe, ukutshintsha amanzi rhoqo emva kweentsuku ezimbini ukuya kwezintathu kwaye uhlala ucoca amatye asezantsi kakuhle.
Kwintlanzi encinci, yayiyidrama xa wasweleka.
Bandishiyele iintlanzi ezimbini xa bendizicelile, kwaye emva kweentsuku ezintathu babhubhile baphila iminyaka emine kwaye ndibakhathalele kakuhle kodwa andazi kwenzeka ntoni.
U-Luis Eduardo Manotas sitsho
I-Aequidens diadema (mojarrita) yintlanzi irhamncwa lezibungu zezinto ezibulalayo (iingcongconi) ezihambisa iDengue, iChikungunya neZica; iyaqhelana namanzi amadama ezindlini ukuze isetyenziselwe ukwenziwa kwasekhaya kwaye iqinisekisa ukupheliswa kweengcongconi.
U-Luis Eduardo Manotas S. MD.
Phendula uLuis Eduardo Manotas
Iintlanzi zam sele ziyi-100, andazi nokuba yintlanzi okanye ufudo xD!
Iintlanzi zam bezineminyaka eli-11 eyadlulayo kwaye itanki yentlanzi yi-35 cm nge-16 cm, kwaye kulungile, ndilahlekelwe liliso!
ekugqibeleni mila capellades sitsho
sinentlanzi eneminyaka engama-20 ubudala
Phendula kwi-fina mila capellades
Ndineentlanzi ekhaya kwitanki yeentlanzi kwaye zihlala iminyaka eyi-15 enye iminyaka eyi-16 (iintlanzi zamanzi zegolide nezindala zamanzi zikwabizwa ngokuba zicocekile ezantsi)
Ewe, ndiyawatshintsha amanzi entlanzi qho emva kweenyanga ezintathu nangaphezulu kwaye ikwitanki leentlanzi elingasenakulunga. Isenze sikhulu! Ndiyathemba ukuba ihlala iminyaka engama-3.
Qaphela: yenye yezo trinkets zamanzi abandayo
Phendula u sori
Ndinentlanzi ayenzileyo eyi-molly kwaye iye yasinda de yahamba, wayeneminyaka emi-3 kwaye wababulala ngoku yedwa kwaye sele eneminyaka engama-4 kunye nam, kwitanki leentlanzi elula kwaye ngaphandle kokukhathalela. Yongezwe ukuze uyisebenzise kuvavanyo lwebhayoloji. Akafi hahaha.
Ndiyathanda… Ndineentlanzi zam ezisuka kubungakanani bephalanx. Namhlanje banesandla esivaliweyo. Iminyaka emi-5 yamanzi abandayo kwiitanki zentlanzi. Ngokucacileyo ndibatshintshe baba bakhulu. Kodwa ndingathanda ukuba uphile ixesha elide ...
Bandinike ngeenxa zonke iintlanzi ezincinci ezili-17 zamanzi abandayo kwaye kwiintsuku ezili-15 ezidlulileyo bebesweleka. Andazi ukuba kwenzeka ntoni kubo. Babeneenyanga ezi-4 nathi kunye neenyanga ezi-6 nabani na ondinike bona.
Nceda uncede sitsho
Inja yam uDorozi iyityile intlanzi yam kodwa ndicinga ukuba iphila kuba ndiyamva ukuba uyaphefumla
Phendula kuNcedo nceda
Ndine-telescopic eneminyaka emi-2 ubudala kwaye ndiza kuyinyamekela ukuze ihlale iminyaka emi-5 ngaphezulu.
Ewe, ukuba banokuhlala ixesha elide, thina endlini sasineentlanzi ezintathu kwi-aquarium ukusukela ngo-2008, omnye wasweleka kwiminyaka emi-2 eyadlulayo emva koko kwinyanga ezisibhozo ezidlulileyo kwaye kusekho enye esiyigcinayo.
Ndinentlanzi ebandayo ebiza amanzi, ineminyaka eli-9 ubudala, isindile ekuqaleni kwehypothermia, ukunqongophala kweoksijini ndinokulunywa yenye intlanzi kwaye ngokungathi ayonelanga amaxesha ngamaxesha ndisitya isonka, ke cinga ukuba izakundikhapha ixesha elide, i-chiqui yindawo yonke
Intlanzi yam yenye yeeorenji kwaye ineminyaka engama-20 ubudala, ihlala iyodwa kwaye ikwitanki leentlanzi, ngoku ilitha ezingama-20
Ndineentlanzi ezi-2 iintlanzi zam zingaphezulu kweminyaka emi-5 ubudala
NCEDA NCEDA NDIYINKOSI YAKHO YONYANGO sitsho
IINTSUKU ZAM ZI-PESTIE 3, NDENZA NTONI UKUZE NDIGQIBE IINTSUKU EZI-6 KUNYE NE-5 ??
Phendula UNCEDO NCEDA NDIYINANI LOMNTWANA WAKHO INOMBOLO
pollardo fernandez sitsho
Ndine ntlanzi enkulu andazi ukuba izakuphila ixesha elingakanani kodwa ayizukuyeka ukuhamba
Phendula pollardo fernandez
Ndinentente yeorenji. Ndinayo kwisikhongozeli esinye apho bandinike sona kwaye inyani kukuba indibambe kakhulu. Iintlanzi zineminyaka emi-5 ubudala. Le ntlanzi iphawula inqanaba ebomini bam, ndiyithenge xa ​​uHiba wayekunyaka wokuqala we-ESO kwaye ngoku ndikumjikelo woqeqesho ndiyayiqonda ukuba yintoni. Ukuba olunye lwezi ntsuku luyahamba, inxalenye yam ihamba naye. Kufana nomzalwana omncinci, nokuba bancinci kangakanani, uyabathanda njengezihlobo zakho.
Kutheni ungatshongo ukuba ungakanani okanye uphila ixesha elingakanani?
I-lebiasin yam okanye intlanzi yamgxobhozo yaphila iminyaka eli-12 kwaye yasweleka njengendoda endala, yayifukame ngaphezulu kwaye iyimfama kwiliso elinye, ngaphandle kombala wayo oluhlaza okwesilivere ojike waphantse wamnyama wabhitya esiswini sayo ... Wayenomdla nasekuzingeleni iintlanzi ezincinci ezinje ngeeguppies endandihlala ndimnika zona zokutya ...
U-Luis Antago Herrera Betancourt sitsho
Ndiyazithanda iintlanzi zintle kukho iintlobo ezininzi enkosi ngolwazi
Phendula luis antago herrera betancourt
Adriana mazzantini sitsho
Iintlanzi zam etankini zihlala zihlala ngaphezulu kweminyaka eli-15, intlanzi yegolide endinayo ngoku indala kakhulu kwaye isaphila, kufanele ukuba ineminyaka eli-16 okanye eli-17 ubudala kwaye isese….
Phendula kuAdriana Mazzantini